Goolhaye Jan Oblak Oo Kooxda Liverpool Amaan Kala Dul Dhacay? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Goolhaye Jan Oblak Oo Kooxda Liverpool Amaan Kala Dul Dhacay?
Goolhayaha Atletico Madrid Jan Oblak ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan wax ka badan Liverpool oo kaliya marka loo eego seddexleydooda gooldhalinta ah oo uu sheegay inay u qalmaan.
Liverpool ayaa wajihi doonta Atletico lugta hore ee wareega 16ka Champions League ee ka dhici doonta Wanda Metropolitano Maanta Oo salaasa ah.
Sadio Mane, Mohamed Salah iyo Roberto Firmino ayaa markale u muuqda kuwo halis weyn ku ah Atletico, kuwaasoo badiyay kaliya hal kulan 7dii kulan ee ugu danbeysay.
Laakiin Oblak, oo laga yaabo inuu door muhiim ah ka ciyaaro kooxda LaLiga, ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo laga walwalo oo aan ka aheyn kaliya weeraryahannada Liverpool.
“Sida iska cad waxaan falanqeynay wax walba laakiin ugu danbeyn dhamaan seddexdu waa ciyaartoy heer caalami ah,” ayuu ku yidhi shirkiisa jaraa’id.
Iyaga kaliya maahan, Liverpool waa koox, qof walba oo garoonka ku jiraana waa ciyaartoy cajiib ah Waxay ku jiraan qaab aad u wanaagsan sidaas darteed waxaan u baahanahay inaan ka walwalo kulligood, qofna shaqsi ahaan maahan.
Waxaan ka walwalsanahay Liverpool koox ahaan, waxaan ciyaareynaa Liverpool, ma ahan seddex ciyaaryahan oo waa weyn oo weerarka ah, waxay noqon doontaa ciyaar aad u adag dhamaanteen seddexdaana dhibaato ayay nagu keeni doonaan.
Halka Atletico ay ku dhibtooneyso qaab sameynta, Liverpool ayaan laga badinin Premier League, waxaana ay hogaanka 25ka dhibcood ku hayaan, Oblak wuxuu sheegay in kooxda difaacaneysa koobka yurub inay u qalmaan in la doorbido wareega 16ka.
“Waa koox aan sida caadiga ah hal ciyaar looga badin hal sano gudaheed, waa ay aad ugu cadcad yihiin waana hubaa inay yihiin kuwa ugu cadcad,” ayuu yidhi.
“Laakiin taasi micnaheedu maahan inaan iska dhiibi karno oo aan u oggolaan karno inay u ciyaaraan sida ay doonayaan. Waxaan dooneynaa inaan u ciyaarno ciyaarteena ugu fiican ee ugu macquulsan, tan ugu fiican xilli ciyaareedka ilaa iyo inaan lugta labaad ku soo baxno nolosha.
Waxaan dooneynaa inaan sameyno intii karaankeena ah oo aan ciyaareyno sida ugu fiican oo aan ka horimaano Liverpool oo haatan meel fiican ku sugan waqtigan.
Luke Shaw Oo Ka Digay Bruno Fernandes Waa Maxay Sababtu?